Duufaanta Lorenzo: astaamaha, asalka iyo isbedelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
El Duufaanta Lorenzo wuxuu dhacay Sebtember 2019 wuxuuna ku yaallay 45 digrii Longitude galbeed. Waxay u timid inay saameyn ku yeelato xeebaha galbeed ee ugu hooseeya Yurub marin ay ku dhammaatay cirifka woqooyi ee Islaantii Ingiriiska. Waxay ahayd duufaan aad u naxdin badan in la arko in ay tahay mid ka mid ah ifafaalooyinkii ugu horreeyay ee noocan ah ee ka dhaca qaybtan adduunka. Waa duufaantii ugu xoogga badneyd ee ka muuqata meel u dhow Spain illaa iyo inta aan diiwaannada ka hayno.
Sababtaas awgeed, waxaan u hibeyn doonnaa maqaalkan si aan u soo koobo dhammaan astaamaha Hurricane Lorenzo oo haddii aan mar kale arki doonno, tani waxay dhici doontaa mustaqbalka.
1 Isbedelka Cimilada iyo duufaannada
2 Astaamaha Hurricane Lorenzo
3 Duufaanta Lorenzo ee aagga Spain
4 Miyay markale dhici doontaa?
Isbedelka Cimilada iyo duufaannada
Waxaan ognahay in cawaaqib xumada isbedelka cimilada ay tahay kordhinta soo noqnoqoshada iyo xoojinta dhacdooyinka cimilada daran sida abaaraha iyo daadadka. Xaaladdan oo kale, waxa inta badan saameeya jiilka duufaannada waa inay la yeeshaan celceliska heerkulka adduunka oo sii kordhaya. Waa in lagu xisaabtamo in dhaq dhaqaaqa abuurista duufaanku ay la xiriirto xaddiga biyaha uumi baxa hawada iyo farqiga u dhexeeya biyaha badaha kala duwan. Tan macnaheedu waxa weeye in meelaha ugu badan ee biyaha uumi baxaan, roobab xoogani ay ku dhammaadaan maaddaama dhammaan biyahani ay ku dhammaadaan isu-ururin iyo samaysma daruuro roob leh.
Kordhinta heerkulka celceliska adduunka, waxaan isbeddel ku yeelan doonnaa dhaqdhaqaaqa jawiga. Meelaha ay markii hore ka qabowsanayd, way ka sii kululaan doontaa sidaa darteedna, waxaan yeelan doonnaa sicir-barar sareeya. Duufaantii Lorenzo waxay ku sii jeedday Yurub, markay u dhaqaaqday waqooyi-bari, waxay uruurisay xoog si ay u noqoto duufaan ka tirsan Qaybta 5. Tani waa qaybta ugu sarreysa ee cabirka Saffir-Simpson. Waxaa lala barbardhigay duufaantii halista ahayd ee Katrina ee ku dhufatay New Orleans sanadkii 2005..
Astaamaha Hurricane Lorenzo
Kaliya maahan in lala barbardhigo Hurricane Katrina marka la eego xoog, laakiin sidoo kale aagga ay ku dhufato. Dhacdadan aadka u gaarka ah ee ka jirta aaggan Atlantic waa markii ugu horreysay ee la duubay. Marka loo eego dhammaan cabbiraadaha hay'adaha iyo khubarada, dariiqa Hurricane Lorenzo waxay saameyn ku yeelatay qaaradda xoogaa fudud, dhibaatada ugu weyna waxay ka jirtay Azores. Wuxuu ku yimid aaggan sida dabaylo gaadhaya 160 km / h iyo dabaylo ka badan 200, qodobada qaar. Markay gaadhay Jasiiradaha Ingiriiska durba way daciiftay oo looma tixgelin inay tahay duufaan.
Markay duufaan ka kacdo badweynta, waxay quudataa biyaha uumi baxa waxayna gaadhaan ugu badnaan markay gaadhaan xeebaha. Si kastaba ha noqotee, markii ay gasho qaaradda, way daciifaysaa oo way lumaysaa sida ay u soo galayso Tani waxay ka dhigeysaa duufaanada in looga baqayo dhulka xeebta marka loo eego meelaha gudaha. Inta fog ee aaggu yahay, ayaa inbadan laga badbaadiyaa duufaannada.
Duufaanta Lorenzo ee aagga Spain
Waa dhif iyo naadir in lagu arko duufaan meel sidayada oo kale ah. Jawaabta ugu horeysa ee la siiyo shakiga noocan ah waa iska cadahay. Waxyaabaha ugu cajiibka badan ayaa ah dhabbaha iyo gunta duufaantaan, laakiin duufaannadu waxay ka bilowdaan qaab dhismeedkooda Afrika. Waa halkan meesha mowjadaha khalkhalka laga dhaliyo ee sababa xasillooni-darrada waana la jiidayaa. Markay xasilooni darrooyinkaani gaaraan badda ugu diiran ee Kariibiyaanka, waxay noqdaan duufaanno dabiici ah oo xoog badan oo aan caadi ahaan aragno.
Waxa aan markan gaarin Caribbean-ka tan iyo ayaa la kulantay biyo diirran oo ku filan samaynta duufaanka. Halkii ay galbeed u mari lahayd waxay u baxday bariga. Sidii aan horey u soo sheegnay, si ay duufaanku u sameysmaan, waxay qaadataa oo keliya biyo tayo leh oo ka dhigaya qadar badan uumiga biyaha in la sharraxo oo ugu dambeyntii lagu magdhabo joogga. Tani waa sida daruuraha duufaanku u samaysmaan.
Waxay ahayd inay u gudubto oo kaliya dhanka 45 digrii galbeed Longitude si Duufaanta Lorenzo ay u sameysmaato. Waa run in sidii raadin aan caadi ahayn loogu talagalay wixii aan u baran jirnay, laakiin halka dhanka waqooyi, qeybta 5-aad ayaa la qaatay. Waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan dhacdadan ayaa ah inay ku dhacday dhabbe aan caadi ahayn iyo, in kasta oo ay soo martay biyo yar oo diiran, haddana waxay ku guuleysatay inay qaadato tamar ku filan si ay u gaarto qaybta ugu badan ee duufaannada.
Kuwani waa sababaha ay Hurricane Lorenzo u noqotay mid ka mid ah duufaannadii ugu caansanaa xilligeenna. Marka laga hadlayo dhalashada duufaanta, waxaan u aragnaa inay xiriir la leedahay isbedelka cimilada, sidaan horay u soo sheegnay. Waa run inay tahay inay hesho biyo ka diiran sidii caadiga ahayd si ay u gaarto qaybta 5, laakiin Sikastaba xaalku ha ahaadee, jiritaanka duufaanta noocan ah toos ugama la xiriiri karto isbedelka cimilada. Waxaan ubaahanahay daraasado badan oo kusaabsan astaamaha iyo kiisaska la midka ah si aan u xaqiijin karno wax sidan oo kale ah. Waa in lagu xisaabtamo in isbeddelka cimilada uu leeyahay saameyn muddo dheer ah iyo in weli aysan jirin caddeyn ku filan oo lagu xiriirin karo saameynta isbedelka cimilada iyo sameynta Hurricane Lorenzo.
Miyay markale dhici doontaa?
Shakiga dad badan ayaa ah haddii aan markale ku aragno duufaan qeybtaan ah deegaankeena. Saadaasha hawada Spain waxay sharxaysaa in isbedelka cimilada aan ubaahanahay inaan leenahay daraasado kaladuwan iyo ifafaalo la mid ah si aan u ogaano inay jiraan nooc nooc ah ama ay jiraan isbeddelo ku dhaca dabeecadaha duufaannada. Xiisad ayaa lagu xusay daraasadaha taasna waa, waa inaan aragnaa haddii duufaanno la mid ah ay yimaadaan sanadaha soo socda si ay uga awoodaan inay ka hadlaan qaabkan. Sanadkii hore waxaan leenahay Leslie oo dabeecad la mid ah Lorenzo lahayd. Iyada oo tan, ka waxay leeyihiin shaki ku saabsan saameynta isbeddelka cimilada ee qaabka sameynta duufaanka.
Duufaanta Leslie waxay saameysay dalkeena waxayna ahayd duufaantii ugu awooda badneyd ee soo gaarto Jasiiradda Iberia tan iyo sanadkii 1842. Waxaa sidoo kale loo arkaa mid ka mid ah duufaannadii ugu waqtiga dheeraa ee Atlantic. Waxay sidoo kale lahayd dabeecad aad u yaab badan tan iyo markii ay isbeddelo joogto ah ku yeelatay dhabbihiisa. Tani waxay sababtay in khubaradu aysan si wanaagsan u maleegi karin koorso.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto Duufaanta Lorenzo iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Duufaanta Lorenzo
Aragtida ah qulqulka qaaradda